[अनुभूति] ‘होमवर्क’ बुझाउन नपाउँदा - साहित्य - नेपाल
[अनुभूति] ‘होमवर्क’ बुझाउन नपाउँदा
केही घन्टाको यात्रापछि नौबीसेमा फेरि रोजाइका दुई पाटा देखिए– तातो कि चिसो ? यी दुई पेयबीचबाट मैले तातो चिया रोजेँ । र, काठमाडौँ छिरेँ ।
उत्तरी भेगको भन्सारबाट दक्षिण झरेर डुम्रे पुगेपछि म पूर्वतिरको काठमाडौँ लागेको हुँ । मसँग डुम्रेबाट पश्चिम पोखरा लाग्ने बाटो पनि थियो । मैले रोजेँ– काठमाडौँ । मुग्लिन पुगेर गाडी रोकिँदा मसँग दुई स्वादमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आयो, ‘शाकाहारी कि मांसाहारी ।’ मैले मूल्य हेरिनँ र अभ्यस्त स्वाद उन्मुख नै भएँ । केही घन्टाको यात्रापछि नौबीसेमा फेरि रोजाइका दुई पाटा देखिए– तातो कि चिसो ? यी दुई पेयबीचबाट मैले तातो चिया रोजेँ । र, काठमाडौँ छिरेँ ।
कलिलो उमेरमा गतिलो नम्बरको प्रमाणपत्र थियो मसँग । सुनिएको अस्कल, टीसी अथवा पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्नुपर्छ भन्थे सबै । तर, मलाई चन्डोलबाट ‘विक्रम टेम्पु’ चढेपछि पुगिने रत्नपार्क छेउछाउबाट कहाँ कसरी जाने पत्तो थिएन । लगभग म दिमाग भएको तर ‘दुनियाँ’ थाहा नभएको प्राणी थिएँ । अचेलको स्वरूपमा घरपरिवार भएका तर समय नपाएका सहरिया छोराछोरीजस्तै कसैको साथ नपाएको अवस्थामा थिएँ । केही बुझेपछि मैले ‘डेरा’ लिएँ । बाटाघाटा थाहा पाएँ । खासमा चाहिने मार्गनिर्देश पाइनँ र ‘मानविकी’ पढ्न थालेँ ।
पढाइ र भोगाइमा अनेकन् मोड आए । थुप्रै बाटा देखिए । दोबाटोसम्म जिन्दगीले एउटा गन्तव्यतिर उन्मुख गराउँथ्यो । यद्यपि, चौबाटोको जावलाखेल होस् या नयाँ बानेश्वरको मध्यभाग, त्यहाँ मैले आफूलाई चिडियाखानाको पशु यात्रामा पुग्नबाट रोक्दै आएँ र आइरहेको छु । र, यही क्रममा यतिखेर म नियतिको धर्मपथमा छु । धर्मपथको यात्रा बडो कठिन छ । अधर्मीहरूको बिगबिगी र साम्राज्य फैलावटमा सत्य बाँच्न कति गाह्रो छ, त्यो बूढो पीपलबोटलाई थाहा हुनुपर्छ । पीपलबोटले पत्रपत्रिकाको समाचार व्यापार देखेको छ, अपार मान्छेका दौडधुप नियालेको छ अनि पीपलबोटले थाकेका र सुस्ताएकालाई छहारी पनि दिएको छ ।
मानविकीको पढाइले ‘माननीय–कमाइ’को भिल्ला र कटेज नदिने पत्तो थियो मलाई । रत्नराज्यको रंगमञ्चबाट इन्द्रेणी अपेक्षाका स्वप्न मूर्त नहुने जानकारी थियो मलाई । म मानवीय सत्यका बाटा र पाटामा रम्न चाहन्थेँ । यो ‘तान्त्रिक’ सहरले खोजेको चीज दिन्छ भन्थे मान्छेहरू, नभन्दै मैले खोजेको र रोजेको लक्ष्य र अभीष्ट भेटेँ । मैले उच्छवासका ‘कविता’ खोजेँ, त्यो पाएँ । मैले विधुर र विधवा सत्यमा सेतो खुसीको ‘ कथा’ चाहेँ, त्यसलाई मैले ग्रहण गर्न कुनै आइतबार कुर्नु परेन । गीत, गजल, मुक्तक जीवन विम्बका द्योतक ठान्दै त्यसैमा आफूलाई घुलन गराएँ । अनि, यस्तै भयो । आवाजविहीनको दमित सोच, शैली र सिद्धान्तको ‘समाचार’ खोज्दाखोज्दै मेरो ‘आकार’ र ‘प्रकार’ बदलियो ।
हो रहेछ, जीवन जुन आयाम र आयतनमा फैलन चाहे पनि उसको उद्भव र उत्सर्ग कस्तो छ ? त्यसैले नै धेरै अर्थ राख्दो रहेछ । यस अर्थमा मैले मेरी आमा र पिताजीबाट जे–जस्तो आड, भरोसा र अभ्यर्थना पाएँ, त्यसैले मलाई यो यात्रामा अविचलित तुल्यायो । पिताजीलाई अहिले पनि थाहा छैन, मेरो पदीय चिनारीको ‘कार्यकारी सम्पादक’को मर्म र धर्म । मैले के पढेँ, कति पढेँ ? त्यसको लेखाजोखा र सांगोपांगो मापन गर्नुहुन्न उहाँ । पिताजी भन्नुहुन्छ, ‘जीवन चर्चित होइन, चलायमान हुनुपर्छ ।’ उहाँको ठहर छ, ‘थेग्रिने’ मानसिकता, मोटो शरीरमा ‘बोसो’जस्तै हो ।’
उठ्नासाथ जप–तप र व्यायामले स्फूर्त बन्नुहुन्छ पिताजी । शाकाहारी भोजनको सत्यमा उहाँले हामीलाई चाहिँ कहिल्यै मांस–मदिराको अपहेलित दृष्टिकोणमा व्याख्या गर्नु भएन । कसैले भन्नुभन्दा आफैँले बेहोर्नुले नतिजा प्राप्त हुने दृष्टिकोण छ उहाँको । एकपटक मलाई पिताजीले सतीघाटको झोलुंगे पुलमा एक्लै हिँड्न सिकाउनुभएको म बिर्सन्नँ । पुल साह्रै हल्लिन्थ्यो । म डराउँथेँ पुल तर्न । मलाई पिताजीले एकपटक एक्लै पुल तराएपछि घाटपारि पुग्नासाथ भन्नुभयो, ‘डर, त्रास र अत्यास आफू आफैँले आफ्नू मनबाट हटाउन सक्नुपर्छ छोरा ।’ पुल तर्नुसँगै साढे दुई घन्टाजति हिँड्नुपथ्र्यो ‘स्कुल’ पुग्न । करिब एक घन्टा त बाक्लो जंगलको बाटो थियो । त्यो पनि ठाडै उकालो । यी बाटाका बिब्ल्याँटाहरूमा म आत्मभरोसाका अनेकन् सपना साँच्दै हिँड्थेँ । एक्लै हुँदा सतीघाटको प्रसंगमा आफूलाई होम्थेँ ।
यो नाम र प्रसंगसँग मेरो पारिवारिक साइनो र मर्म छ । खास गरी मेरी जिजुआमा त्यही घाटमा ‘सती’ जानुभएकाले त्यसलाई सतीघाट भनिएको हो । सती–सत्यको एउटा लामो कथानक छ ।
चन्द्रशमशेरले सती प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेलगत्तै जिजुआमा सती जानुभएको थियो । त्यसको लामो इतिहास र फेहरिस्त म सुनिरहेको हुन्थेँ । अहिले पनि कैयौँ प्रसंगमा मान्छेहरूले सती–विम्बको प्रयोग गर्छन् । धेरैजसोले यस विम्बमा ‘सतीले सरापेको देश’ भनेको सुन्छु । मन कोक्याउँछ यस्तो सुन्दा । मेरी जिजुआमाले समर्पित–साथको उत्सर्गमा जसरी आफूलाई होम्नुभयो, त्यसको महत्त्वलाई विहंगम–दृष्टिबिना मापन गर्न सकिँदैन । सत्य–निष्ठा र समर्पणले शीतल अनुभूति नगरे मात्रै आगोले पोल्ने हो । मान्छे जब स्थूल शरीरको भोगाइमा सीमित हुन्छ, तब मात्रै ऊ ऐय्या–आथ्यु गर्छ । भर्भराउँदो आगोको रापलाई वायुचेतनाले जित्नासाथ मोक्ष यात्रामा पुग्छन् मान्छेहरू । सायद जिजुआमा
यही जिद्दीस्वरूप अग्निकुण्डमा होमिनुभयो र सती–सत्यपथमा हिँड्नुभयो ।
यही ओजिलो पारिवारिक विगतको चिनारीले मलाई सानैदेखि पृथक् परिचय दिइरहेको थियो । घरअगाडि भर्खरै खोलिएको माध्यमिक विद्यालय छाडेर गोरखा पुग्नुको कारण र कर्म पनि यस्तै थियो । एक पटक मेरा पिताजीसँग भेट भएछ– गुरु हितराज पाण्डेको । मेरो तेज–पढाइको कुरा सुन्नुभएका हितराज गुरुले भेटमा भन्नुभएछ, ‘ल दाजु † अब जेठो छोरो मेरा जिम्मामा दिनूस् ।’
गुरुकुल, नैतिक शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट दीक्षित पिताजीले हितराज सरलाई ‘वचन’ दिनुभयो । पिताजीको वचनका कारण म घरबाट धेरै पर पुगेँ । उमेर थिएन आफैँ पकाउने–खाने, भाँडा माझ्ने । तर, परेपछि सिक्दै गएँ । मेरो हरेक भोगाइ, सिकाइ र बुझाइका साक्ष्य स्वरूपसँगै मार्गनिर्देशक हुनुहुन्थ्यो– हितराज गुरु ।
दिन बिते । समयले कोल्टो फेर्दै गयो । विद्यालय र हितराज गुरुका प्रिय शिष्य बनेर मैले माविको पढाइ सकेँ । सामाजिक, आर्थिकदेखि राजनीतिक पाटो र परिपाटी बदलियो । एक दिन भेट भयो हितराज गुरुसँग सिंहदरबारमा । उहाँ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो । म उहाँको अगाडिपट्टिको कुर्सीमा बसेर ‘ जडवत्’ हेर्दै थिएँ । सोझो, सरल र नम्र विनोदी स्वभावका गुरु सामुन्ने खुल्न सकिरहेको थिइनँ । उहाँले कुममा प्याट्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘ल भन † के छ तिम्रो हालखबर । अनि, पिताजी सन्चै हुनुहुन्छ ?’
गुरुको अगाडि म थिएँ । उहाँले मेरो मात्रै कुरा गर्नुभएन । पिताजीलाई सम्झनुभयो । र, हामीले हाम्रा कुरालाई त्रिकोणीय आयाममा धकेल्यौँ । हितराज गुरुले फर्निचर विषयमा हामीलाई ‘ अब्लिक’बाट ‘ आइसोमेट्रिक’ स्वरूपमा रेखांकनको तौरतरिका सिकाउनुहुन्थ्यो । गज्जब थियो त्यो प्रविधि र दृष्टिकोण । ३० डिग्रीमा खिचिएका रेखाहरूलाई ४५ डिग्रीमा हेर्ने र नदेखिएका भागहरूको ‘हिडन–लाइन’ तान्ने सूत्र । प्राविधिक पढाइमा ‘डस्टर’ बनाइयो । ‘पिर्का’ तयार पारियो । डेस्क र बेन्च बनाउन सिकियो ।
मेरा हातहरूले ‘आरो’ समाएको थिएन त्यसअघि । काँटी र कीलाको सन्तुलित आयामको पत्तो थिएन मलाई । पटक्कै नरिसाएर सिकाउनु हुन्थ्यो– हितराज गुरु । संयम, धैर्य र दोहोर्‍याइको क्रम पराकाष्ठामा नपुगेसम्म उहाँ ‘चर्को’सम्म बोल्नु हुँदैनथ्यो । बेलाबखत झसंग हुन्छु म उहाँलाई सम्झँदा– यस्तो सादगी र सपाट मान्छे पनि कसरी ‘जनयुद्ध’मा लाग्नुभयो होला भनेर ।
राजनीतिक मुद्दा, मर्म र मान्यताको चकमार्फत उहाँले कहिल्यै ‘र’ पनि लेख्नुभएन हामीबीच । काला कर्मको बोर्ड देखाएर उहाँ बरू ‘डस्टर’लाई गाली गर्नुहुन्थ्यो यदाकदा । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘यो डस्टरलाई अक्षर देख्नै हुँदैन, मेटिदिइहाल्छ ।’ पटक–पटक गुरुका मुखबाट यो सुनेका कारण मलाई अहिले पनि छोराछोरीले बोर्डमा मार्करले लेखेका कुरा मेट्न संकोच लाग्छ । हुन त हाम्रो संकोचले रीतिरिवाज, प्रचलन एवं पद्धति रोकिँदो रहेनछ ।
सम्झिरहनेछु तिनै गुरु, जसले पछिल्लो परिदृश्यमा आएर मुलुकको संघीय संरचनालाई गति दिन कुनै कसुर बाँकी राख्नुभएको छैन । अहोरात्र खटेर संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा अहम् योगदान पुर्‍याउनु भयो । दुर्भाग्य † उहाँले छरेको उज्यालो, उहाँले अघि बढाएको दृष्टिकोण र परिवेश डस्टरले अक्षर मेटेकै नियतिमा दौडिन पुग्यो । धेरै पछि सम्पर्क भयो उहाँसँग । उहाँमा किञ्चित पदीय मर्यादाबाट बाहिरिएको अनुभूति थिएन । उहाँ ‘राष्ट्रिय आवश्यकताको’ मर्मले आफू बाहिरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए गर्व गर्ने बताइरहनुभएको थियो । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘मैले त तिमीहरूलाई होमवोर्क गर्न समय दिन्थेँ, मलाई त गरिसकेको होमवर्क पनि बुझाउन दिइएन ।’
जीवनमा अनेकन् गृहकार्यका व्यस्तता र परिभाषाले सबै गाँजिएकै छन् । मलाई मेरै योजना र कर्मले थिचिरहेको छ । पिताजी आफ्नै खोज र खुसीको स्वप्न प्रसंग उठान गर्नुहुन्छ । गुरुहरूका आफ्नै शिष्य–सिद्धान्त र समर्पणका समालोचना होलान् । जीवन यही भिन्न भिन्न परिभाष्य मानसिकताको गठजोडले अनुप्राणित हुने हो । लड्छन् कोही र उठ्ने प्रयत्न गर्छन्, कोही हारमा पलायनको यात्रा खोज्छन् । हितराज गुरुलाई थोरै लडाइयो । तर, उहाँले सम्झौतामा पशु–विकासको जागिर रोज्नु भएन ।
स्थानीय–विकासको विहंगम दृष्टिमा उहाँले गाईखुर–च्याङ्ली हुँदै मुलुकभर आफूलाई स्थापित गराउनुभएको छ । भलै, मेरा पिताजीले भोगेको राजनीतिक पीडाको मर्म र मैले आफैँले पत्रकारितामा भोगेको व्यवधानजस्तै उहाँले पनि त्यही गरेर जस नपाउने नियति भोग्नुभएको छ । यस्तै रहेछ । सबै गुरुहरूले शिष्यका मर्म, पीडा र समर्पणको महत्त्वबोध नगर्दा रहेछन् ।
[तीन किताब] प्रिय फेन्टासी
वर्षका १० आख्यान
वर्षका १० गैरआख्यान
डीपी भण्डारीको वेडिङ कार्ड
[तीन किताब] फिक्सन र ननफिक्सन २०–२०
[अभिमत] लेख्न छाडेर सन्न्यासतिर ?